राजश्व कार्यालय धनगढीद्वारा २३ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन, कस्तो अवस्थामा पाइन्छ करमा छुट ? - Dhangadhi Khabar
शुक्रबार ०१, असोज २०७८ ०२:४५
राजश्व कार्यालय धनगढीद्वारा २३ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन, कस्तो अवस्थामा पाइन्छ करमा छुट ?
'महामारीको बेला पनि सबै करदाताहरूले राजस्व बुझाइदिनाले लक्ष प्राप्त गर्न सम्भव भयो'
धनगढी । आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्य भन्दा २३.५४ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब ५० करोड १० लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा पाँच अर्ब ५३ करोड ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ (१२३.५४ प्रतिशत) राजश्व सङ्कलन भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरानन्द देवकोटाले अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण उठ्न नसकेको र बक्यौता रहेको राजश्व आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उठेकोले आन्तरिक राजश्व लक्ष्यभन्दा बढी सङ्कलन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक अर्ब ४१ करोड २२ लाख १२ हजार आयकर उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा एक अर्ब ८३ करोड एक लाख ६८ हजार (१२३.५४ प्रतिशत) सङ्कलन भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आर्थिक ऐन अध्यादेश २०७८ ले आम करदाताहरूलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा विभिन्न छुट सहितको व्यवस्था गरेकोले सोही अनुसार आफूहरूले विभिन्न माध्यमबाट जनस्तरसम्म जानकारी दिनुका साथै अध्यादेश २०७८ को पालन गर्दै सेवा सञ्चालन गरेको उनले बताए ।
देवकोटाले भने, 'अन्त शुल्कमा दर्ता भएका आम करदाताहरूले वार्षिक नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । नवीकरण नगराएकै कारण १०० प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो तर यस आर्थिक ऐनले तिर्नु पर्ने कर बुझाए पछि सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरेको छ । पहिले खरिद बिक्री खाताहरू कर कार्यालयमा आएर कर अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्थ्यो तर अब करदाता आफैले प्रमाणित गरेर राख्नुपर्छ, राख्न सक्ने छन् । आयकरहरूमा विभिन्न छुट रहेको छ । जस्तै, साना 'डे वान' (२०लाख) सम्मका कारोबार हुनेले ९० प्रतिशत सम्म छुट प्राप्त गरिराख्नुभएको छ । 'डे टु' ५० लाख सम्मका कारोबारहरू ले ७५ प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिएको छ । र १ करोड सम्म कारोबार गर्नुहुने करदाताहरूलाई ५० प्रतिशत कर छुट सुविधा रहेको छ । भने मूल्य अभिवृद्धि लगायतका विभिन्न कर छुट स्किमहरू रहेका छन् ।' उनले भने ।
सोमबार ११, साउन २०७८ ०९:२० मा प्रकाशित
#आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढी